Ny fahalalana fiarovana ny aretim-pon'ny olona sasany dia efa ho avy na handeha hiasa, amin'ny fipoahana ankehitriny tokony hatao? 1. Ahoana ny fomba fitafy saron-tava fandidiana azo ampiasaina amin'ny lalana mankany am-piasana.Try tsy hitondra fitateram-bahoaka dia asaina mandeha, bisikileta na mitondra fiara tsy miankina ianao, fiara fitateram-bahoaka hiasa.Raha mila mampiasa fitateram-bahoaka ianao, dia aza hadino ny manao saron-tava. amin'ny fotoana rehetra.Mamporisiho mba tsy hikasika zavatra amin'ny bus.
2, ny fomba hidirana ny tranobe alohan'ny hidirana ao amin'ny biraon'ny birao ekena ny fanekena ny mari-pana, ny mari-pana dia normal ihany ny miditra ao amin'ilay trano, ary manasa tanana amin'ny fandroana.Raha mihoatra ny 37.2 temperature ny hafanan'ny vatana dia aza miditra amin'ny tranobe ho an'ny asa. , ary modia an-trano hijery sy fitsaharana. Raha ilaina dia midira hopitaly.
3. Ataovy madio ny faritra birao ary manidina mandritra ny 20-30 minitra intelo isan'andro. Azafady avelao ho tavela ny rano rehefa mivezivezy.Keep ny halaviran'ny olona 1 metatra eo anelanelan'ny olona, ​​ary manaova saron-tava rehefa miasa ny olona maro.Manasa tanana sy misotro rano matetika.Ny lafiny amin'ny fanaovana fandraisana dia manao saron-tava.
4. Asaina mitafy saron-tava sy manasa tànana alohan'ny hidirana ao amin'ny efitrano fivoriana. Ny elanelam-pivoriana dia mihoatra ny 1 metatra.Ravao ny fifantohan'ny fivoriana, mifehy ny fotoana fivoriana, lava loatra ny fotoana fivoriana, sokafy ny fivoahan'ny varavarankely 1 .Ny toerana sy fanaka dia tsy maintsy esorina rehefa vita ny fivoriana.Amin'ny torolàlana omena dia avela hosimbohina amin'ny rano mangotraka.
5. Ny efitrano fisakafoanana dia manamboatra sakafo misaraka hialana amin'ny mpiasa mivaingana. Ny vihinan'ny trano fisakafoanana dia voalan'ny indray mandeha isan'andro, ary ny vata fisakafoana sy ny seza dia voapoizina rehefa ampiasaina.Tableware dia tokony ho pasteurized.Joriho ny efitrano fiasana madio sy maina. Aza afangaro amin'ny menaka voankazo ny sakafo manta. Mialà amin'ny hena manta. Ny sakafo mifaninana betsaka amin'ny sakafo, ny menaka kely masira kely azon'ny sira.6. Manaova sarontava fandidiana azo ampiasaina rehefa mivoaka ny asa. Sasao ny tananao ary manala voly aloha aorian'ny fakana ny saron-tava ao an-trano.Ravao ny telefaona sy ny lakile miaraka amin'ny ranona misy sira na 75% ny alikaola .Joriho ny efitrano misy rivotra sy madio, aorao ny olona maro hiarahana.
7. Mivoaha ary manaova saron-tava mba hisorohana ny vahoaka.Mifoha ny halaviran'ny olona iray metatra mihoatra ny 1 metatra avy amin'ny olona ary aza atao ny hijanona ao amin'ny toerana be olona.
8. Manoloha fiaraha-mientana mety sy maotina mandritra ny asa sy fitsaharana mba hahazoana antoka ny fahasalamana.
9. Ny faritra azon'ny besinimaro dia atody isan'andro amin'ny foyer, corridor, efitrano fivoriana, tafo, tafo, tohatra, trano fidiovana sy ny faritra hafa, ary ny famafazana ny famafazana dia tokony hampiasaina araka izay azo atao. fampifangaroana.
10. Toroina handroaka ny atiny sy ny fikambanan'ny fiara manokana amin'ny fitsangatsanganana ofisialy misy alikaola 75% indray mandeha isan'andro. Ento ny bara am-baravarankely hanaovana saron-tava, tokony hanolotra ny fiara fitaterana bisy amin'ny alàlan'ny 75% alikaola. eo amin'ny efitranon'ny fiara sy ny tànana manala fandroahana.
11, ny mpiasan'ny kaonty lozisialy na ny mpamatsy dia tsy maintsy manao saron-tava sy ny fonon-tànana vita amin'ny goura, aza atao mifandray mivantana amin'ny hena sy ny akora akoho ary ny fanadiovana ny tanana rehefa vita ny fonon-tànana. Ny mpiasa dia tsy maintsy manao fonon-tànana milina fanosotra rehefa miasa sy manasa ny tanany aorian'ny asa. Ny olona dia tsy maintsy manao saron-tava hiasa, ary manontany sy manoratra ny satan'ny olona vahiny, tatitra ara-potoana tsy ara-potoana.
12, fitsidihana ofisialy ny fomba tokony hanaovana akanjo saron-tava.Ao alohan'ny hidirana ao amin'ny biraon'ny birao, maka fitsapana hafanana ary ampidiro ny tantaran'ny hubei fambara sy ny soritr'aretina toy ny tazo, kohaka ary dyspnea.Amin'ny tsy fisian'ny fepetra voalaza etsy ambony, ary ny vatana mari-pana ao amin'ny 37.2 ° fepetra mahazatra, afaka miditra amin'ny sehatry ny trano.
Sasao ny tanana alohan'ny sy aorian'ny fandefasana ny antontan-taratasy, ary manaova saron-tava rehefa mandalo antontan-taratasy.14, ny famonoana an-tariby ny fomba fanaovana telefaona an-tariby 75% alika mamoaka indroa isan'andro, raha ampiasaina matetika dia azo ampitomboina tsara.